पत्रकार ऋषि धमलाको ‘अनुराग’ हेर्न कुमारी हल पुगे दुई मन्त्री
काठमाडौं । शुक्रबारदेखि देशभर प्रदर्शनमा आएको पत्रकार ऋषि धमलाको नेपाली कथानक चलचित्र ‘अनुराग’ हेर्न शनिबार नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु कुमारी हलमा पुगेका छन् । कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रविन्द्र
प्रमुख अतिथि नबनाएकोमा पत्रकारलाई धम्काउदै राजदुत, पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारवाही के ! (भिडियो)
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज २८१ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको यस विशेष एपिसोडलाई दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको छ । आजको यस विशेष एपिसोडमा दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदुत अर्जुन
दुईजना जेठाजुद्वारा बुहारीलाई पालैपालो बलात्कार गरेपछी...
धादिङ, ११ असोज । बुहारी बलात्कार गरेको आरोपमा दुई जेठाजु पक्राउ परेका छन् । धादिङ जिल्लाको थाक्रे गाउँपालिका ११ की २२ वर्षीया बुहारीलाई बारम्बार बलात्कार गरेको अरोपमा ३५ वर्षीय र २९ वर्षीय दुई जेठाजुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ
महोत्तरी, १२ असोज । भंगहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव साहले हिसाबकिताब नदिएको भन्दै आफ्नै कार्यालयका लेखा अधिकृत पवनकुमार अधिकारीलाई बुधबार कुटपिट गरेका छन् । कर्मचारी संगठनहरूले मेयरलाई कारबाही गर्न बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार
यौनसम्पर्क गर्ने बेला जिब्रो टोकियो, जेलमा पुगिन् पत्नी
नयाँदिल्ली । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा एक गर्भवती महिलाले किस गर्ने क्रममा आफ्ना श्रीमानको जिब्रो छिनालेकी छन् । ती महिलालाई आफ्नो श्रीमानको रुप राम्रो लाग्थेन त्यसकारण उनी खुशी थिइनन् । श्रीमान्–श्रीमतीबीच हरेकदिन जसो झगडा भइरहन्थ्यो । स्थानीय
यी महँगा बाइकको कर बढ्दा बिक्री हुनै छाडे
काठमाडौं, १२ असोज । अमेरिकन सुपर प्रिमियम बाइक हार्ली डेभिड्सन भर्खरै नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । हार्ली व्यावसायिक घराना आइएमई समूहले नेपाल ल्याएको हो । नाडा अटो सोमा हार्लीको ‘आइरन’ र ‘सुपर लो’ मोडल सार्वजनिक गरियो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ
यसरी भयो श्रेयाको बलात्कारपछि हत्या
पोखरा । सोमबार बिहानैदेखि कुसुम पौडेल साथीहरूसँग रक्सी पिएर मातेका थिए । उनले बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म स्थानीय हेम विकको भट्टी पसलमा अन्य चारजनासँग बसेर रक्सी पिएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ । उनी ती साथीहरूसँग थप रक्सी लिएर डाँडामाथि उदय
‘यौनसम्बन्धका बारेमा धेरै सुनेकी छु’
रेखा राई, मोडल रेखा राईलाई घर परिवारबाट कलाक्षेत्रमा लाग्न सपोर्ट छ । सबैको सहयोगका कारण उनी कलाक्षेत्रमा लागेकी छिन् । म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ शुरु गरेकी रेखाले धमाधम काम पाउन थालेकी छिन् । रेखाको उचाइँ होँचो भए पनि काममा उचाइँ छुन थालेकी छिन् । उदयपुर
बि.सं.२०७५ साल आश्विन १२ गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस् ! आजको पञ्चाङ्ग –सहित
वि.सं. २०७५ आश्विन १२ गते शुक्रबार तदनुसार ई. सं. २०१८ सेप्टेम्बर २८ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३८, (ञलागा), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:५४ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:५२ बजे, इटहरी, सुनसरी, नेपालमा
सीआईबीको खोजीमा रहेका दुई उपसचिव अख्तियारद्धारा पक्राउ
काठमाडौं, ११ असोज । किर्ते गरेको अभियोगमा खोजीको सूचीमा रहेका दुई उपसचिवलाई अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनीहरुलाई खोजी गरिरहेको थियो । पक्राउ पर्नेमा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंमा कार्यरत
यी पति जसले आफ्नै पत्नीलाई ढुङ्गाले हानेर…
काठमाडौँ, ११ असोज । पोखराको लेखनाथमा एक व्यक्तिले आफ्नी कान्छी श्रीमतीको हत्या गरेका छन् । उनकी जेठी श्रीमतीको यसअघि नै मृत्यु भइसकेको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ३२ खुदीको खोला भन्ने ठाउँका ५२ वर्षीय ऐनबहादुर गुरुङले ६० वर्षीया श्रीमती श्रीमाया गुरुङको